DOWNLOAD Northrop B-2A Mweya AlphaSim FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 32 395
Litle chinoshamisa yepamusoro Aimbova payware asi ikozvino mahara! The rakapotsa B-52 ane rakapotsa Cockpit uye tsika mitinhimira. Rakavimbika kuongorora uye nezvakanyorwa! Verenga Readme.txt
The Northrop Grumman B-2 Mweya (aizivikanwawo sezvo namano bhomba) chinhu American inokosha bhomba patinenge vakaderera zvaioneka namano michina rakagadzirirwa rakapinza batana kuzvidzivirira Anti-ndege; zviri kukwanisa dhipuroya zvose akawanda uye zvombo zvenyukireya. The bhomba ine vashandi vaviri uye zvinogona anodonha anosvika makumi masere 500 LB (230 kg) -class JDAM GPS-runotungamirirwa mabhomba, kana gumi namatanhatu 2,400 LB (1,100 kg) B83 enyukireya. The B-2 ndiye chete ndege kuti anogona kutakura guru mhepo-kuti-pose Standoff zvombo ari namano configuration.
Development pakutanga zvakatanga pasi "Advanced Technology bhomba" (ATB) chirongwa munguva Carter kutarisira, uye ayo kuita raiva rimwe zvikonzero kukanzura yake B-1 Lancer. ATB akaramba munguva Reagan kutarisira asi zvaShe pokumbononotswa yayo sumo kwakaita kuti kudzorerwa kuna B-1 chirongwa uyewo. Program mari akamuka kumarudzi kukura. Yakagadzirirwa uye kugadzirwa nenzira Northrop Grumman pamwe rubatsiro kubva Boeing mutengo ndege nerimwe neavhareji US $ 737 miriyoni (mu 1997 madhora). Total procurement mari neavhareji $ 929 mamiriyoni paminiti ndege, izvo zvinosanganisira handingadariki zvikamu, midziyo, retrofitting, uye Software rutsigiro. Zvachose chirongwa mutengo kusanganisira kukura, engineering nekuongororwa, neavhareji $ 2.1 mabhiriyoni paminiti ndege muna 1997.
Nokuda kwayo wandei musoro uye operative mari, basa racho dzichipesana muna US Congress uye pakati Joint Chiefs pamusoro Staff. The ichitenderera-pasi kweHondo Yemashoko mukupera chikamu 1980s zvinoshamisa kuderedzwa kudiwa ndege, iyo yakagadzirirwa nechinangwa rakapinza airspace Soviet uye kurwisa mukuru-ukoshi kushungurudza. Mukunopera 1980s uye 1990s, Congress slashed kutanga zvirongwa kunotenga 132 Ndege kuna 21. Muna 2008, mumwe B-2 rakaparadzwa kuputsika nguva pfupi pashure yasimuka, uye vashandi vemo vabudiswa zvakachengeteka. Dzinokwana 20 B-2s kuramba basa pamwe United States Air Force.
Kunyange pakutanga yakagadzirwa achinyanya kuva bhomba renyukireya, iye B-2 itange kushandiswa muhondo kudonhedza akawanda mabhomba Serbia panguva Kosovo Hondo 1998, uye ndakaona akaramba kushandisa panguva yehondo muIraq uye Afghanistan. B-2s vaishandiswawo munguva 2011 hondo yevagari Libyan. (Wikipedia)
Northrop B-2A Mweya AlphaSim FSX & P3D Download
Downloads: 18 108
Downloads: 10 699